Outook Mutengi WeManeja: YeMahara Yekubata manejimendi App yeHofisi 365 Bhizinesi Yekutanga | Martech Zone
Mumwe wandaishanda naye aibvunza chisingadhuri mutengi wehukama maneja aigona kushandisa bhizinesi rake diki. Mubvunzo wangu wekutanga kumashure waive wei hofisi neemail chikuva chaaishandisa kutaura netarisiro yake nevatengi uye mhinduro yaive Hofisi 365 uye Outlook. Kutumirwa neemail ndiko kwakakosha kune chero CRM kuitisa (chimwe chezvinhu zvinoverengeka), saka kunzwisisa kuti mapuratifomu ari kutoshandiswa mukambani zvakakosha kudzikisa chiyero chezvinhu zvaunoyedza uye / kana kutenga.
Vanhu vazhinji havazvizive, asi Hofisi 365 Bhizinesi Premium Kunyoreswa ine yemahara yekuwedzera-yeiyo Outlook, inonzi Outlook Mutengi Mutengi. Heino mhedziso yepuratifomu:
Outlook Mutengi Wemaneja anoronga otomatiki ruzivo, kusanganisira maemail, misangano, mafoni, zvinyorwa, mabasa, madhiri, uye nguva dzakatarwa munzvimbo imwechete. Zviyeuchidzo zvenguva uye runyorwa rwakabatana rwevako vanonyanya kutaurirana uye madhiri anobatsira kuona kuti chii chakakosha pamusoro pepfungwa. Uye iwe unogona kugovana ruzivo rwevatengi nechikwata chako chose kuitira kuti vatengi vave neruzivo rwusingachinji zvisinei nekuti vanotaura naani.
NaAptlook Customer Manager, haufanire kuisa software nyowani kana kupedza mazuva uchidzidzisa timu yako. Uye nekuti yako data inogara muHofisi 365, hautambise nguva yakakosha kumisikidza zvinongedzo kune imwe software kana masevhisi kana kubata zvigadzirwa zvakasiyana.
Iyo Outlook Mutengi WeManeja nharembozha app yeIOS inokupa iwe nekukurumidza kuwana kune vatengi ruzivo kana iwe uri kuenda kana uchida kutora ruzivo rutsva nekukurumidza.
Makambani anogona kushandisa Microsoft Flow kutyaira inotungamira kubva kunyorera uye mawebhusaiti muAptlook Kutaurirana maneja
Dhawunirodha Outlook Bata maneja weIOS
Tags: bata manejaCRMmutengi manejaMicrosoftmicrosoft crmoffice 365maonero crmmaonero mutengi manejabhizinesi diki crm
Chii chinonzi Ad Server? Ad Kushanda Kunoshanda Sei?
Cloudimage.io: Yakachengetwa, Yakakodzwa, Yakakwidziridzwa, kana Yakasimwa Mifananidzo seSevhisi